Apple Watch waa smartwatch-ka soo saara qanacsanaanta ugu badan | Wararka IPhone
Apple Watch waa smartwatch soo saara qanacsanaanta ugu badan
Waa inaan qirto in markaan maqlay warkan aanan layaabin uguyaraan: sida laga soo xigtay warbixin waxaa daabacay shirkadda cilmi baarista suuqa ee JD Power, the Apple Watch Waa saacadda caqliga leh ee leh gaadhay darajooyin sare xagga qanacsanaanta Macaamiisha, halka booska labaad uu yahay kan ay sida weyn u xafiiltamaan, Samsung, iyo dhammaan in kasta oo xaqiiqda ah in Kuuriyaanka ay yimaadeen suuqa ugu horreeya
Daraasadda waxaa lagu gaadhay iyadoo la cabiray Celceliska qanacsanaanta ee 2.696 isticmaale (Taasoo aniga ila muuqata in yar) oo iibsaday smartwatch sanadkii la soo dhaafay. Fududeynta isticmaalka, raaxada, ismaamulka, astaamaha taleefanka, qiimaha, kacsanaanta / adkeysiga, cabbirka shaashadda, qaabka / muuqaalka, kalsoonida, codsiyada jira, iyo adeegga macaamiisha ayaa la tixgeliyey, yacni tixgelin wax kasta oo xisaabta lagu dari karo.
Apple Watch waa smartwatch aad ugu jeceshahay
Guud ahaan, Apple waxay heshay dhibco dhan 852 1000kiiba, 6 dhibcood oo ka sareeya 842 ay gaadhay Samsung. Marka la eego madax-bannaanida ama wareegga xukunka, kuwa ka socda Cupertino waxay heleen 5 dhibic 5, halka Samsung iyo noocyada kale ee waaweyn ay heleen 2 ka mid ah 5 (hal dhibic ka yar celceliska qaybtan). Top 5 waxaa dhameystirey Sony oo leh 840 dhibcood, Fitbit oo leh 839 iyo LG oo leh 827 dhibcood.
Sannadkii 2015, shirkad kale, kiiskan Wristly, ayaa sheegtay in qanacsanaanta macaamiisha Apple Watch ay gaadhay 97%, iyo noocii ugu horreeyay ee nidaamka hawlgalka Apple Watch, oo aan aaminsanahay inaan wali loo magacaabin watchOS, waxay ahayd sannado fudud oo ka fog watchOS. 2 iyo isbarbardhiga noocaas ah oo leh watchOS 3 waxay noqonaysaa wax aan ka yarayn oo lagu qoslo.
Dhinaca kale, iyo haddii bilowga ah post Waxaan idhi lama yaabin warkan, waxaan u maleynayaa inay tahay inaan sidoo kale tixgalino iswaafajinta saacadaha smart-ka iyo aaladda mobilka. Qof kasta oo adeegsada Apple Watch waxaa loo malaynayaa inuu ku samaynayo iPhone waana halka Apple ay ku guuleysato dagaalka markale, nidaamka deegaanka. Sida ugu fiican saacadda Samsung oo leh Tizen OS waa (sida Gear S2 ee uu haysto walaal), wax yar oo ay ka qaban kartaa a saacad ku kaydso App Store adiga oo leh kumanaan barnaamij sida Apple Watch, oo aan ku xusno waxay isticmaalaan nidaamyo laga soo dhisay meel laga soo bilaabay isla shirkad.
Ma ku raacsan tahay natiijooyinka daraasadda JD Power?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch waa smartwatch soo saara qanacsanaanta ugu badan
Pokémon GO wuxuu maalmo kadib imaan doonaa Spain iyo wadamada kale ee yurub